RASMI: Kulamadii Horyaalka LaLiga Ee Real Madrid Vs Athletic Bilbao Iyo Granada Vs Atletico Oo La Baajiyey - Laacib
RASMI: Kulamadii Horyaalka LaLiga Ee Real Madrid vs Athletic Bilbao Iyo Granada vs Atletico Oo La Baajiyey
October 13, 2021 Abdiwahab Ahmed
Golaha Isboortiga waddanka Spain ayaa shaaciyey in la baajiyey kulamadii horyaalka LaLiga ee toddobaadka soo socda ee kooxaha ka dhisan magaalada Madrid ee Real iyo Atletico ay la ciyaari lahaayeen Athletic Bilbao iyo Granada.
Tababare Carlo Ancelotti ayaa la siiyey fursad ay ciyaartoydiisu ugu nastaan kulanka Champions League ee Salaasada ay ku waajihi doonaan Shakhtar Donetsk, iyadoo dib loogu dhigay kulankii ay Sabtida la ciyaari lahaayeen Athletic Bilbao, taas oo ugu soo beegmaysay xilli ay dhawr ciyaartoy oo muhiim ahi waqti dambe kasoo laabanayaan Brazil.
Horyaalka Spain oo bishii horena dib u dhigay laba ciyaarood oo ay midkood lahayd Barcelona ayaa mar kale qaatay tallaabadii oo kale, maadaama ciyaartooyo muhiim ah ku maqan yihiin Latin America oo ay kaga qayb-gelayaan kulamada isreeb-reebka Koobka Adduunka.
Xidhiidhka kubadda cagta Spain ee RFEF ayaa diiday inuu ogolaado codsi ka yimid kooxaha Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Bilbao iyo Granada oo ay ku doonayeen in dib loogu dhigo ciyaarahooda toddobaadkan maadaama dersin ciyaartooyo ah aanay awoodi doonin inay u dheelaan iyagoo xilli dambe soo gaadhaya Spain.
Markii ugu dambaysay waxa la baajiyey ciyaarihii Sevilla vs Barcelona iyo Villarreal vs Alaves, haddana waxa sidii oo kale laga yeelay Real Madrid vs Athletic Bilbao iyo Granada vs Atletico Madrid.
Real Madrid oo kulamadii ugu dambeeyey ee horyaalka dhibco lumisay, sidoo kalena laga badiyey ciyaartii Champions League ee Sheriff ayaa waxa uu go’aanka dib loogu dhigay ciyaarta Athletic Bilbao uu u yahay mid ka farxinaya oo ay dib u heli karaan ciyaartoyda ka maqan iyo kale oo kasoo kabanaya dhaawacyo.